Wararka Maanta: Khamiis, Mar 22, 2012-Dagaal Khasaare geystay oo Ciidammo kawada tirsan Dowladda Somalia ku dhexmaray Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir
Dagaal Khasaare geystay oo Ciidammo kawada tirsan Dowladda Somalia ku dhexmaray Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Dagaal u dhexeeyay ciidammo kawada tirsan degmada KMG ah oo maanta ka dhacay degmgada Wadajir ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay askartii u dagaalku u dhexeeyay.
Saddex ka mid ah askartii dagaalku u dhexeeyay ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen goobta, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen lix kale, waxaana dagaalkan uu qarxay markii toogasho lagu dilay ciidammo ka tirsanaa kuwa degmada oo lagu dilay goob ay lacago uga qaadayeen gaadiidka dadweynaha.
"Dagaalk culus ayaa ka dhacay xaafadda Nasteexo ee degmada Wadajir, wuxuu saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka," ayay tiri Nuuro Cali oo ka mid ah dadka daggan xaafaddaas oo saxaafadda la hadashay.
Maamulka degmada Wadajir ayaan ka hadlin dagaalka, waxaana socda dadaallo ay ku doonayaan waxgaradka iyo maamulka degmada inay ku qaboojiyaan xiisaddan ka dhalatay degmada, taasoo saameyn ku yeelatay dadka xaafadda lagu dagaalamay ku nool.
Ma ahan markii ugu horreysay oo dagaal uu ku dhexmaro degmada Wadajir ciidammo kawada tirsan dowladda KMG ah, balse dagaalkan ayaa noqonaya kii ugu xoogga badnaa ee ka dhaca degmadaas tan iyo markii uu billowday sannadkan.
Inkastoo ay xaaladdu daggan tahay hadda, waxaa haddana la dareemayaa xiisado iyadoo ay goobaha lagu dagaalamay yaallaan maydadka askartii ku dhintay dagaalka halka dhaawacyadii ka dhashay dagaalkana loo qaaday isbitaallada Muqdisho qaarkood si loo daweeyo.
Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Tan iyo intii xilka laga Qaaday Wasiirkii hore Maaliyadda Somaliland, Eng: Maxamed Xaashi Cilmi, Waxay Dadweynaha ku dhaqan Somaliland hadal hayeen sababta looga qaaday xilka wasiirkaasi, maadaama oo uu yahay wasiirkii Miisaaniyadda kor u qaaday, isla markaana danyarta Somaliland ka daayey lacagtii dugsiyadda laga qaadi jiray. Isbadal dhinaca Nabad-galyada ah oo laga dareemayo Degmada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan 3/22/2012 7:38 AM EST